SSD ỌSỌ ULE - SSD - 2019
E mepụtara usoro "Roof Profi" iji gbanwee nyocha nke usoro ihe zuru ezu nke ụdị dị iche iche. Akụrụngwa na-enye ndị ọrụ usoro nhazi maka ịtọ data data ntinye, na-enye gị ohere ịbanye na paradaịs na-agaghị ekwe omume maka iwu ma ọ bụ ọrụ pụrụ iche. Ka anyị lebakwuo anya na onye nnọchianya a.
Mepụta ọhụụ ọhụrụ
Usoro mmemme na-ezukọ na windo ebe ịchọrọ ịmepụta nkọwa nke usoro ọhụrụ ahụ. Dejupụta ụdị a chọrọ ma họrọ otu n'ime ụdị nchịkọta dịnụ. Biko mara na algorithm maka ịgbakọ usoro ahụ ga-adịgasị iche dabere na ụdị ahọrọ. Echefula ịkọwa ego ego, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkọ ọnụ ego nke ihe.
Mgbe ịmechara iwu ahụ, windo ahụ ga-emeghe, nke nwere ọtụtụ ọnụọgụ dị iche iche, ihe na nhọrọ maka nchịkọta. Ọ na-egosiputa obosara na ogologo nke mpempe akwụkwọ ahụ, efegharị na nnukwu ụlọ ahụ gafere. Tụkwasị na nke ahụ, a na-echefu ego nke usoro a, a gbakwunyere mgbakwunye ndị ọzọ.
Iji na-agbanwe onwe gị na ozi na tebụl na ụdị, ị ga-agbanye gaa n'usoro edozi site na iji nchịkọta n'elu. Ma ọnọdụ a abụghị ihe niile - iji ngwaọrụ ndị dị na panel ahụ, echekwara ọrụ ahụ ma zipụ ka ọ bipụta.
N'elu aka nri na windo isi bụ tebụl na components. Na nhazi usoro, na-agbakwụnye ihe ọhụrụ ma wepu ihe ochie. A na-eme nke a site na menus dị iche. Họrọ ihe ndị ọzọ na-agbakwunye, tinye ha n'ime ihe ahụ, ka ha wee bụrụ akụkụ nke ọrụ ahụ.
Enwere ihe ndi ozo di iche, nke esite na ya tinye ihe ndi ozo, nani otu ugbua. N'ebe a, a na-anakọta ihe ọmụma gbasara onye nke ọ bụla, idezi na ihichapụ ụfọdụ ozi dị.
Ọrụ dị ukwuu;
Ọdịdị dị mfe na nke a na-ejighị n'aka.
Ngwunye Ngwá Ọrụ bụ ngwá ọrụ dị mma iji tụpụta ihe oriri na ụlọ. Ọ bara uru ma ndị ọrụ ahụmahụ nwere ahụmahụ na-eji usoro ihe omume maka nzube ọrụ, yana maka ndị amateurs na-eme nyocha maka nzube ha. Usoro ikpe ụbọchị 30 dị maka nbudata maka n'efu na-akparaghị ókè na arụmọrụ.
Download mbipụta mbipute Roofing Profi
Master 2 Astra Open Mmemme maka ịkọkọta ụlọ ỤWA
Ngosipụta Roof bụ ngwá ọrụ multifunctional bụ nke dabara adabara maka ịmepụta nchịkọta nke ọnụọgụ achọrọ nke ihe ụlọ. Kwadoro maka mmefu ego.
Onye Mmepụta: Bogach A.M
Ọnụ: $ 110